Lehilahy 2 tantsaha avy any amin’ny faritra Antalaha iny no nikaroka mpividy teto Antananarivo nanomboka ny 2 novambra 2019, ka ny alatsinainy 16 desambra teo izy no nisy lehilahy mahafantatra mpividy. Mitentina 27.000.000 ariary ny vidin’ireto lavanily ireto. Nanomboka teo no nisian’ny fifandraisana teo amin’ilay lehilahy milaza ho mahita mpividy sy ny tompon’entana. Ny alatsinainy 6 janoary teo ary dia tonga tao amin’ny trano fonenan’ilay tompon’entana ireo olona voalaza fa hividy ilay lavanily sy ilay lehilahy nahita ireo mpividy ireo. Nifanaraka ary fa eny amina Banky iray eny Analakely no handoavana ny vola. Ilay lavanily kosa anefa dia efa nobatain’ireo mpividy ary noentiny tanaty taxi. Ny andron’io dia namonjy banky izy ireo. Nampiandrasin’ilay mpividy tao anaty fiara ilay tompon’ny lavanily sy ilay lehilahy nahafantarana azy ireo fa izy andeha haka ilay taratasim-bola ao amin’ny banky. Rehefa niditra tao anefa ity lehilahy milaza mpividy dia nivoaka tamin’ny vavahady iray avy ao ambadika. Nampandre ny mpitandron’ny filaminana ny tompon’entana ka notazomina ilay lehilahy niray tsikombakomba tamin’ilay mpividy lavanily.